J / KAM Digital Standardizes Playback with JVC Monitors | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » J / KAM Digital Standardizes waxay la ciyaareysaa JVC Monitors
J / KAM Digital Standardizes waxay la ciyaareysaa JVC Monitors
WAYNE, NJ, DECEMBER 3, 2019 - Aqoonsiga faa'idooyinka kujira xalinta jilitaanka fiidiyowga joogtada ah, J / KAM Digital ayaa dhowaan u beddeshay sahaydeeda oo dhan DT-V taxane filin / kormeeraha istuudiyaha JVC Professional Video, qayb ka mid ah Shirkadda JVCKENWOOD Corporation. Shirkadda fadhigeedu yahay Burbank ee warbaahinta iyo tafatirka tifaftirka madaddaalada ayaa ugu yeeraya kormeerayaasha DT-V si ay u bixiyaan heerka midab ahaanta iyo isku halaynta mashruuc kasta. Iyada oo in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah la siinayo kiro, tafatirka suites iyo adeegyada taageerada farsamada, macaamiisha J / KAM waxay udhaxeeyaan telefishanka shabakada iyo qulqulka muujinta soosaarka filimka.
J / KAM waxay dooratay kormeerayaasha JVC iyagoo ku salaynaya dalabyada kala duwan, taageerada shirkadeed ee sarreysa iyo qiimaha qiimaha la awoodi karo. Erik Beauchamp, CTO, J / KAM Digital Editing Solutions ayaa yidhi: “Sanadihii la soo dhaafay, waxaan gaarnay in qayb muhiim ah oo ka mid ah qormooyinka shaqada dib-u-habeeynta ay leeyihiin kormeer lagu kalsoonaan karo. “Tani waa muhiim maxaa yeelay muuqaalka sawirka si aad ah ayaa loo toogtay. Ka dib waxaa lagu farsameeyaa xarun maalinle ah oo leh midabeeye midab ah, kaas oo quseeya muuqaal gaar ah wax soo saar, ka dibna u taga tifaftirayaasha oo ay tahay inay hubiyaan waxa ay ku arkaan korjoogteynta waa waxa ay DP u maleyneyso. Lahaanshaha kormeerayaal bixiya sawirro midab-sax ah ayaa muhiim u ah mashruuc waana sababta aan ugu aasaasnay ​​diyaaraddaheena oo dhan oo ah JVC's DT-V taxanaha kormeeraha goobta / istuudiyaha. ”
J / KAM Digital waxay iibsatay in ka badan 50 JVC DT-V kormeerayaal taxane ah - G1Z iyo G2Z, iyo sidoo kale moodooyinka hoose ee DT-R, si ay u maareeyaan nidaamyadooda tafatirka ee 50-oo lagu daro deegaanno kala duwan oo ka kala duwan barnaamijyo kala duwan. Beauchamp ayaa yidhi: "Waa muhiim in la mideeyo kormeerayaashayada mid ka mid ah ganacsatada sababta oo ah taasi waxay ina siineysaa isku xirnaan u dhexeeya lacagta wax lagu hagaajiyo" “Iyada oo la socota kormeerayaasha JVC, waxaan ognahay in macaamiisheenna aysan waligood wici doonin si ay u yiraahdaan waaxda u baahan in la xakameeyo ama ay jirto arrimo. Kaliya waa wax ka yar wax laga walwalo, sidoo kale waxay hoos u dhigeysaa taageeradayada.
Beauchamp, JVC awoodeeda muuqaalka midab-cabbirka ee kormeerka u-socodka ayaa u oggolaanaya istuudiyaha in uu is-waafajiyo si joogto ah, iyo iyadoo unugyadu ay ka soo noqonayaan mashaariicda - yaraynta suuragalnimada dhibaatooyinka ka dhaca garoonka. Intaa waxaa sii dheer, kormeerayaasha taxanaha DT-V waxay bixiyaan waxyaabo badan oo wanaagsan, oo ay ku dhiseen J / KAM iyo macaamiisheeda, oo ay ku jiraan taariikh-weynta, mawjad-weyneedka, baaxadda vector iyo howlaha zebra.
Beauchamp wuxuu intaas raaciyay: "Marka laga soo tago xarunteenna guriga, waxaan sidoo kale bixinnaa qalab tifaftire oo ka sii baxaya goobta," ayuu raaciyay Beauchamp. Hada waxaan u dhoofineynaa jawiga tafatirka geyntiisa oo dhan Brooklyn Jimmy Kimmel Live, oo ay ku jiraan lix kormeerayaasha JVC, iyadoo sidoo kale la siinayo dhammaan qalabka tifaftirka loogu talagalay Kimmel halkan gudaha Hollywood. Kormeerayaasha waxaa loo isticmaalay istuudiyaha, qolalka tifaftiraha iyo bey'adda, sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan u dirno unugyo New York ah oo la mid ah la-habeynta kormeeraha gudaha ee istuudiyaha Los Angeles. Iyada oo la socota kormeerayaasha taxanaha JVC DT-V, ujeedadaas waa mid fudud. Xaqiiqdii maahan wax qarsoon in kormeerayaasha taxanaha JVC DT-V ay adag yihiin; dhamaan iibiyaasha ugu fiican ayaa adeegsada kuwan. ”
KU SAABSAN JVC XIRFADLAYAAL VIDEO
Xarunteeduna tahay magaalada Wayne, New Jersey, JVC Professional Video waa qayb ka mid ah Shirkadda JVCKENWOOD Corporation, oo gabi ahaanba leh shirkada JVCKENWOOD Corporation. Shirkaddu waa soo saare hormuud ah isla markaana u qeybiya qalabka raadiyaha iyo qalabka fiidiyowga xirfadda leh, iyo sidoo kale nidaamyada saadaalinta D-ILA. Macluumaad dheeri ah, booqo bogga internetka ee JVC Pro.jvc.com ama wac (800) 582 5825.
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta DT-V tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor J / KAM JVC Fiidiyowga Xirfadlaha ah ee JVC JVCKenwood USA Kormeerayaasha SJGolden - Spears & Fiilooyinka Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks Video Engineer	2019-12-03
Previous: Ardayda Filimka ee Prague's FAMU Ka hel cashar maqal ah oo leh Calrec's Brio Console
Next: ASG waxay soo dhawaysaa halyeeyga warshadaha ee Steve Young si uu u Hogaamiyo Howlaha Ganacsiga ee Isdhaxgalka Nidaamyada